Izikhangiso ze-Froggy - Izikhangiso ze-Froggy
Umphumela Wokuhlukaniswa Kwemakethe Kwezebhizinisi
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off ku Umphumela Wokuhlukaniswa Kwemakethe Kwezebhizinisi
Ukuhlukaniswa kweMakethe noma ukuhlukaniswa kwemakethe ukuhlukaniswa kwamaqembu wabathengi noma abathengi abanezidingo ezihlukile, izici, nokuziphatha emakethe ethile. Ukuze abathengi kamuva noma abathengi babe yunithi yemakethe efanayo futhi babe yimakethe ebhekiswe kubo ngecebo labo lokumaketha. Ngamanye amagama, izimakethe ebeziyodwa futhi zibanzi zenziwa izimakethe eziningana ezihambisanayo ngemuva kokuhlangabezana nokwehlukaniswa. Lesi sigaba sihlose ukwenza inqubo yokumaketha igxile kakhudlwana ukuze izinsiza ezikhona zisetshenziswe ngempumelelo nangempumelelo.
Business Ibhizinisi Lokukhangisa, ibhizinisi online
Amaphutha okuqalisa amabhizinisi okudingeka uwagwebe
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off kumaphutha okuqala webhizinisi okudingeka uwagweme
Ibhizinisi lokuqalisa liyithuba lebhizinisi eminyakeni yamuva elithandwa ngabantu abaningi, ikakhulukazi abantu abasha. Akugcini nje ngokuthembisa inzuzo enkulu, kepha leli bhizinisi lingahlala unomphela, inqobo nje uma abenzi bokubi bazi ukuthi bangaliphatha kanjani. Kepha ngeshwa, amabhizinisi amaningi okuqala abambeke ngaphansi kokuphathwa ngenxa yokwehluleka kwabalingisi ukuphatha ukuphatha kahle.
Ukuqonda Ukubaluleka Kokukhangisa Kwenjini Yokucinga (SEM)
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off Ekuqondeni Ukubaluleka Kokukhangisa Kwenjini Yokucinga (SEM)
I-Search Engine Marketing noma okuvame ukufushaniswa njenge-SEM eminyakeni yamuva sekuthandwa kakhulu phakathi kwamabhizinisi aku-inthanethi. Kubantu bebhizinisi abasanda kuqala emhlabeni we-inthanethi, leli gama lingahle lizwakale lixaka. Ukungakhulumi ngegama elithi Search Engine Optimization (SEO) okuvame ukunanelwa ngabakhangisi ukuthuthukisa ibhizinisi noma ibhizinisi. Ekuqaleni, igama elithi Marketing Engine Marketing lalisetshenziselwa i-SEO nemisebenzi yokukhokha ekhokhelwayo.
Marketing, SEO izindaba zokumaketha, amasu marketing, ukuthambekela kwezentengiso, ukumaketha kwenjini
Ungalenza Kanjani Icebo Lokumaketha Elilungile ngenhlanganisela Yokumaketha
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off on Indlela Yokwenza Isu Lokumaketha Elilungile ngenhlanganisela Yokumaketha
Ukumaketha kuyinto ebalulekile okufanele ibhekwe yinkampani. Le nqubo yokumaketha iqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo evela enkampanini ingafinyelela kubathengi. Ngakho-ke, kudingeka amasu akhethekile ukwenza imisebenzi yokukhangisa nokuqinisekisa ukuthi inkampani ithola inzuzo njengoba kulindelwe.
Marketing, Ukukhangisa Kwamakhompyutha izindaba zokumaketha, amasu marketing, ukuthambekela kwezentengiso, ukumaketha online
7 Amaphutha Okuthengisa Ngocingo Okufanele Uwagweme
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off on 7 Amaphutha Telemarketing Kufanele Ugweme
Osomabhizinisi abaningi basakhetha ukusebenzisa amasu okuthengisa ngocingo njengendlela yokwethula noma yokwazisa ngemikhiqizo noma izinsizakalo zabo. Ngaleli su lokuthengisa ngocingo, osomabhizinisi bangafinyelela kububanzi obubanzi bamathemba noma abathengi abangaba khona. Ukufinyelela okubanzi ngokuqinisekile kunikeza amathuba amakhulu okuthengiselana okwenzekayo.
Marketing, Izindaba Zokumaketha umkhankaso wokumaketha, izindaba zokumaketha, amasu marketing, ukuthambekela kwezentengiso
Ukubaluleka Kokunquma Imakethe Ehlosiwe Yebhizinisi Lakho
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off Ukubaluleka Kokunquma Imakethe Eqondisiwe Yebhizinisi Lakho
Uma ungusomabhizinisi, vele, ufuna ukuthi ibhizinisi lakho likhule ngokushesha. Ngakho-ke, ukufeza lokhu kudinga isu lokumaketha elifanele futhi elisebenzayo, elinye lalo elinquma imakethe okuqondiswe kuyo. Imakethe eqondiwe yigama elibalulekile okufanele ulazi njengosomabhizinisi, lapho kufanele ukwazi khona ukunquma imakethe yakho oqonde kuyo kuqala ngaphambi kokumaketha umkhiqizo. Ekunqumeni imakethe eqondiwe, izinkampani kufanele ziqale zihlukanise imakethe ngokuhlukanisa abathengi abanezici ezicishe zifane.
Business Ibhizinisi Lokukhangisa, amasu marketing, ibhizinisi online
Amasu Okumaketha Okudala Wokuphumelela Kwebhizinisi
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off kumasu Wokumaketha Okudala Wokuphumelela Kwebhizinisi
Inhloso enkulu yokusungula ibhizinisi impela ukuthola inzuzo eningi ngangokunokwenzeka. Sebenzisa isu lokumaketha lokudala ngesinye sezinyathelo ongazithatha ukufeza impumelelo yebhizinisi. Vele, udinga ukwenza isu elihle lokumaketha ukuze uthole amakhasimende.
Marketing, Ukukhangisa Kwamakhompyutha amasu marketing, ukuthambekela kwezentengiso, ibhizinisi online, ukumaketha online
Izinyathelo Ezi-3 Ezilula Zokwenza Isu Lokumaketha Kwebhizinisi Lakho
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off ngezinyathelo ezi-3 ezilula zokwakha isu lokumaketha lebhizinisi lakho
Ukumaketha kungenye yemisebenzi ebalulekile eyenziwa izinkampani nosomabhizinisi. Ngisho nakwezinye izinkampani, ukumaketha kuba ngumnyango ohlukile futhi kuthola izindleko zawo. Umqondo wokumaketha uqobo uhlose ukuhlinzekela ukwaneliseka ngezidingo noma ngezifiso zabathengi. Ngakho-ke sidinga isu ukuze inkampani ikwazi ukuncintisana nezinye izinkampani. Ukuhlelwa kwamasu wokumaketha kunganikeza isisekelo sokuthi inkampani ithathe izinyathelo ezisebenzayo ngekusasa.
Business, Marketing Ibhizinisi Lokukhangisa, izindaba zokumaketha, amasu marketing, ibhizinisi online
Izindlela Zokusebenza Eziphumelelayo Zokuwina Lo Mncintiswano
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off kumaqhinga webhizinisi asebenzayo wokuwina umncintiswano
Njengamanje, ukuncintisana kwamabhizinisi kuya ngokuya kuqina, ngakho-ke kufanele kubhekwane nakho ngendlela enempilo nokuhambisana nemithetho ekhona. Ukuba khona kwabancintisana nabo noma izimbangi ebhizinisini kuyinto ejwayelekile. Okufanele kwenziwe ukunqoba lo mncintiswano ukucabanga nokusebenzisa isu elikhethekile ukuze abathengi bakwazi ukushintshela ekusebenziseni umkhiqizo wakho esikhundleni sabancintisana nabo. Kunamasu ambalwa webhizinisi asebenzayo ongawenza ukuze ukwazi ukuwina umncintiswano kalula. Yimaphi amasu la? Bheka imininingwane ephelele ngezansi.
Amaphutha ama-5 okufanele uwagweme kucebo lokumaketha le-Instagram
Amaprosesa asekelwe January 15, 2021 January 15, 2021 Amazwana Off kumaphutha ama-5 okufanele uwagweme kucebo lokumaketha nge-Instagram
Njengamanje, umphakathi useduze futhi ujwayelene nokuba khona kwezinkundla zokuxhumana njengomphelelisi wezindlela zokuxhumana nokuthola ulwazi. Enye yazo i-Instagram, ebonakala ngeplatifomu yokubona kanye nolwazi, okungenye yezinkundla zokuxhumana ezithandwa kakhulu namuhla.
Marketing, Ukukhangisa Kwamakhompyutha, Social Media Marketing amasu marketing, ukuthambekela kwezentengiso, Izikhangiso zezeMphakathi, Ezokuxhumana Ukukhangisa
Mayelana Nezikhangiso ze-Froggy
Siyipulatifomu yokuthenga imidiya ekuxhumanisa nayo yonke imithombo ephezulu yethrafikhi emhlabeni jikelele. Njengamanje sinabakhangisi abakhuthele abangaphezu kuka-11,000 nsuku zonke! Uma uthenga ithrafikhi yethu ephathekayo, yethebhulethi, yohlelo lokusebenza noma yedeskithophu kithi Uzothola ithrafikhi esezingeni eliphakeme, esebenza kahle futhi ephephe sha.
Ibhizinisi LokukhangisaInethiwekhi Yokukhangisaumhlahlandlela wobulunguimihlahlandlela yokusebenzisanaUmhlahlandlela wokuhambisana twitch adc wakha lolUmhlahlandlela wokuhambisana ushwiba isikhangiso s9Umhlahlandlela wobulungu we-twitch jungle guideUmhlahlandlela wobulungu we-twitch jungle mobafire masterUmhlahlandlela wobulungu we-twitch jungle runes s9umhlahlandlela wokuthengisa ohambisanayoimihlahlandlela yokuthengisa ehambisanayoAmathebula wokuhlangana wokuthengisa ahambisanayoukubambisana kokumaketha kwabaqondisi bezinkinga zethoshi incazeloumhlahlandlela wokuthengisa ohambisanayo we-990sImikhombandlela yokuthengisa ehambisanayo yemikhombandlela yenkomba engenzi nzuzoisiqondisi sokumaketha esihambisanayo isiqondisi esingenzi nzuzo onlineukuhweba okuhambisanayo umhlahlandlela wokusesha einumhlahlandlela wokumaketha ohlangene wezezimali ukungena kwami ​​ngemvumeizimali zokuqondisa ezihambisanayo izimali zivikelaumhlahlandlela wokumaketha ohambisana nawo ungena ngemvume ngezimaliimpilo yezeluleko ezihambisanayo zokumakethaizinkambiso zokuthengisa ezihambisanayo nezinsizakalo zomhlalaphansiizithombe ezihambisanayo ze-logo ze-gifilogo ye-affiliate twitch ayikho i-gif yangemuvainkokhelo yokubambisana ehambisanayoisithombe esihambisanayo se-png sendodaisithombe se-affiliate twitch white carraraizidingo ezihambisanayo ze-twitch zokumaketha ezihambisanayoumhlahlandlela wesiza sokusebenzisana we-amazonama-amazon Associates umhlahlandlela ophelele pdfimihlahlandlela ye-amazon yokubuyisaucwaningo lwesigamekogooglesuggestrelevanceungabhalisela kanjani ukuhlangana ngokuhlanganyela ukuze ukhokhelweumkhankaso wokumakethaizindaba zokumakethaamasu marketingukuthambekela kwezentengisoibhizinisi onlineukumaketha onlineimihlahlandlela yokuthengisa ehambelana ne-pinterest hdc2togimihlahlandlela yokuthengisa ehambisanayo ye-pinterest izifanekiso ze-robloxIzikhangiso zezeMphakathiEzokuxhumana Ukukhangisaamathiphu namasu
Inethiwekhi Yokukhangisa Yokusebenza